Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguPier Luca
Indlu entle evalelweyo enombono wolwandle kwiGulf of Trieste. Ifakwe kwi-promontory ye-Aquilina kwindawo edibana ngokuthe ngqo nohlaza (phakathi kwamaphandle, iinduli kunye nolwandle), ineendawo zokupaka zabucala kunye negadi eqhotyoshelweyo.
Ifikeleleka ngokulula ngemoto, ikwimizuzu emi-5 ukusuka kumda weSlovenia kunye nemizuzu eli-10 ukusuka kumbindi weTrieste.
Isikhundla sobuchule sibulela kuqhagamshelo lwemoto yaseItali-Slovenia, ekwalungele abo bafika besuka kwisikhululo seenqwelomoya iRonchi dei Legionari.
Indawo ezolileyo kunye ne-enchanting ejikelezwe buhlaza, obubulela kwindawo yayo ethile kwi-promontory ye-AQUILINIA-ZAULE, unokuyonwabela imbono entle phakathi kolwandle kunye neenduli.
4.45 · Izimvo eziyi-40
KUBO BONKE ABATHANDI BENDALO NEMIDLALO
Kubakhweli beebhayisikile, sisondele kakhulu kwindlela edumileyo yomjikelo we "LA PARENZANA" leyo, esuka eRio Ospo, iwela iRabuiese ukudlula ukuya kwidolophu yasePorec eCroatia.
Kwakhona kufutshane kukho iindlela ezininzi ze-MTB onokuzifumanisa!
Kwabo bathanda i-WALKS ukuya kwi-CLIMBING yokwenyani, umgama omfutshane ungafika e-LA NATURAL RESERVE VAL ROSANDRA, indawo entle kakhulu yobuhle obukhethekileyo obufanele ukutyelelwa ngawo onke amaxesha onyaka.
Izinto ezimangalisayo kunye neendawo ezimangalisayo ezifihliweyo kwindalo zikulindele, kubandakanya iRIO OSPO, i-NOGHERE LAKES, i-SOCERB CASTLE kunye nabanye abaninzi !!!
Umbuki zindwendwe ngu- Pier Luca
Ndim owamnkela ndilawule ibhedi neBreakfast ndincediswa nguMama. Ekubeni sihlala sihlala apha, siyayazi le ndawo kakuhle kwaye sithanda ngokwenene, ukuba kunokwenzeka, ukucebisa nokuchazela iindwendwe ngamathuba ahlukeneyo anikezelwa ngummandla ngamaxesha ahlukeneyo onyaka.
Ndim owamnkela ndilawule ibhedi neBreakfast ndincediswa nguMama. Ekubeni sihlala sihlala apha, siyayazi le ndawo kakuhle kwaye sithanda ngokwenene, ukuba kunokwenzeka, ukucebisa no…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Aquilinia